Buddhism – democracy for burma
!! #BURMA #FB #FAKE #MONKS #Township #Sangha #Sayadaws
On April 18, 2015 April 18, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, FAKE MONKS, MYANMARLeaveacomment
3 villagers dressed as “Monks” drinking and dancing during waterfestival have been called by Township Sangha Sayadaws. Buddhist Burmese community get outcry over on Facebook posted images of the3villagers.
To Minbu District Governor General and local authorities
Township of Religious Affairs Officer
#German #Focus #newspaper #interview #U #WIRATHU #Myanmar #Burma
On March 27, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, FOCUS NEWSPAPER, GERMANY, MYANMARLeaveacomment
GERMAN NEWSPAPER “FOCUS” made an interview with U Wirathu at Mandalay.
Questions about radical islamists,Muslim population, birthcontrol,…
photocredit U wirathu
We will buy Focus Journal , translate and check questions and answers 🙂
#U #WIRATHU #ဂျာမန်သတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူး”
On March 27, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, U WIRATHULeaveacomment
ဂျာမဏီ Focus သတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူးလေးပါ။ 24.3.2015 ရက်နေ့ မနက် 8:30 မန္တလေး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မသဟာယကျောင်းမှာ တွေ့ဆုံမေးဖြေကြတာပါ။
မူဆလင်အန္တရာယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတာတွေတောင် မေးလာကြပါပြီ။
၁။ မူဆလင်လူဦးရေကို ထိန်းချုပ်ရမယ်။
၂။ ဂျီဟဒ်ဝါဒီတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရမယ်။
၃။ မူဆလင်ပြည်သူတွေ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ရမယ်။
#U #WIRATHU #U.S.A #CBS #ရုပ်သံအင်တာဗျူး”
On February 26, 2015 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
“U.S.A CBS ရုပ်သံအင်တာဗျူး”
23.2.2015 မနက် 8:30 U.S.A CBS သတင်းဌာနနှင့် ရုပ်သံအင်တာဗျူးပါတယ်။
22.2.2015 ရက်နေ့ တာမွေကျောက်မြောင်းကြီးတရားပွဲမှာ အစအဆုံး ရိုက်ကူးသတင်းယူတဲ့ အဖွဲ့ပါပဲ။
ကင်မရာဆရာအတော်များများနှင့် လူအင်အားသုံးပြီး ရုပ်သံဌာနကြီးတစ်ခုထဲမှာလို ကျကျနန ရိုက်ကူးတာ တွေ့ရပါတယ်။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့်လည်း အင်တာဗျူးဖို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးကြောင်း သိရပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ၉၆၉ နှင့်ပတ်သက်တာ စာရေးသူနှင့် ပတ်သက်တာတွေ အဓိကမေးပါတယ်။
သတင်းအမှားတွေကို အခြေခံပြီး မေးတာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူတရားဟောလို့ပဲ ရခိုင်အရေးအခင်းကြီး ထဖြစ်သလို မေးလာပါတယ်။
ရခိုင်အရေးအခင်းပြီးမှ တရားဟောတာလို့ ပြောလိုက်တော့ မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်။
ရခိုင်အရေးအခင်းမှာလည်း ရခိုင်တွေက တိုက်ခိုက်လို့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ရသလို မေးလာပါတယ်။
8.6.2012 သောကြာနေ့ မောင်တောမြို့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှု ဗီဒီယိုခွေ မှတ်တမ်းခွေ ထိုးပြလိုက်တော့ အံ့သြသွားပါတယ်။
ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘဲ မောင်းတောမြို့ကြီးကို လိုချင်လို့ ဂျီဟဒ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်း ၁၉၄၂ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အဲဒီတုန်းက ရခိုင် နှစ်သောင်းကျော် အသတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၁၉၄၇ မှာလည်း ဟိန္ဒူတွေကိုသတ်ပြီး အိန္ဒိယပြည်နယ်တွေကို လုယူခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာဟာ ဂျီဟဒ်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းနှင့်ချီပြီး ဖြေကြားပေးခဲ့ရပါတယ်။
အိုဘားမာ ဒေါ်စုတို့အပေါ်အမြင်နှင့် ယန်ဟီးလီကို ပြောရခြင်းအကြောင်းတွေပါ မေးပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာနှင့် မူဆလင်ရောနေလို့ ခွဲပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
မွတ်ဆလင်ပြည်သူတွေက အဓိကတရားခံမဟုတ်ဘူး။ R.S.O တွေက အဓိကတရားခံ၊ မွတ်ဆလင်ပြည်သူတွေ ကို မလိုလားတာမဟုတ်ဘူး။
R.S.O တွေကို မလိုလားတာ
R.S.O တွေကို မရှိစေချင်တာ။
R.S.O တွေက အဓိကတရားခံ။
မွတ်ဆလင်ပြည်သူတွေ ကို မလိုလားတာမဟုတ်ဘူး
R.S.O တွေကို မလိုလားတာ။
(ဝါရှင်တန်ဒီစီ C.B.S သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။)
#Cambodia #deported #US #sisters who #took #naked #photos at #ancient #temple
On February 9, 2015 February 9, 2015 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
They will not be allowed to return to Cambodia for four years. Lindsey and Leslie Adams will be deported on Sunday morning, according to the court’s decision. Cambodian authorities detained the two American tourists soon after they were found taking photos of their partly naked backsides on Friday morning. The Apsara Authority, which oversees all temples in Siem Reap including Angkor Wat temple, said in its statement that “after being questioned over this case, the two tourists had confessed and recognised that they madeamistake by taking naked back photos”. It is the second incident in less than 10 days, after the authority arrested three French male tourists for taking nude photos at another temple complex of Banteay Kdey. Apsara Authority spokeswoman Chau Sun Kerya said the women’s actions were offensive towards Cambodian culture and were inappropriate at suchasacred site.
#Burma #MESSAGE to #US #commission #International #religious #freedom #condemns #BUDDHISM #PROTECTION #LAW
On January 24, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
WHY YOU DON,T CONDEMN MALAYSIA AND SINGAPORE ??
MYANMAR BURMA Buddhist Women Interfaith Marriage Law
Singapore and Malaysia both have long-standing restrictions on interfaith marriage between Muslims and people from other religions. The rules require that non-Muslims convert to Islam in order to register their marriage.Singapore has two marital legislations such as Muslim Law Act and Women’s Charter. It bansamarriage betweenaMuslim andanon-Muslim. A non-Muslim woman is required to attend one-year religious conversion training before becomingaMuslim wife. Official interviewers are obliged to askaMuslim man whether he is able to guide his bride-to-be on the path of becomingaMuslim wife.–Even in accordance with Burma’s 1954 marriage law, there is no protection on Burmese Buddhist Women who marry with non-Buddhists. Burmese Buddhist Women are the ones who suffered most and lost all their rights since there is no protection by state. They got no legal rights, religious rights nor civil rights whatsoever after Burmese Buddhist Women married with non-Buddhist.
#MYANMAR #BURMA #MARRIAGE #LAW #BUDDHIST #WOMEN #DECLARATION #ENGLISH
On January 15, 2015 January 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
#U #WIRATHU #“အမျိုးဘာသာ #သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်”
On January 15, 2015 January 15, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
“အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်”
၂။ လူဦးရေးတိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေ၊
၃။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများအထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊
၄။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို
ဥပဒေကြမ်းအဖြစ် ၂၀၁၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုဥပဒေမူကြမ်း(၄)ရပ်သည် အမျိုး ဘာသာ သာနသာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဥပဒေ(မူကြမ်း) နမူနာတင်ပြချက်များနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲချက်များ ရှိသော်လည်း ဥပဒေပညာရှင်များ၏ ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီစွာရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ခြင်းသည် အမျိုး ဘာသာ သာသနာနှင့် နိုင်ငံလူမျိုးအနာဂတ်အပေါ် စေတနာ ကောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကြိုဆိုပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဥပဒေကြမ်း(၄)ရပ်တွင် ပြုပြင်ဖြည့်စွက်သင့်သည်များကိုလည်း မဘသအနေဖြင့် ဆက်လက်အကြံပြုတင်ပြ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဥပဒေမူကြမ်း(၄)ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြသူတစ်ချို့ သည် သတင်းစာ ဂျာနယ် ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများနှင့် အင်တာနက်စသော မီဒီယာများကို အသုံးပြုကာ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ သိမြင်ရှင်းလင်းနိုင်စေရန် ဤကြေညာချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ဖော် ပြအပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ကိုတန်းတူအခွင့်အရေး ပေးထားသော ဥပဒေဖြစ်သည်။
၂။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသည် အမျိုးသမီးများလွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ကို ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်သော ဥပဒေမဟုတ်၊ အမျိုးသမီးများရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများ မဆုံးရှုံးရအောင် အကာအကွယ်ပေးထားသော ဥပဒေဖြစ်သည်။
၃။ သက်ဆိုင်ရာဘာသာအသီးသီးမှ ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးထားသော ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများ ရှေးကပင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံလောက်သော အကာအကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေမရှိ၍ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ်သည်။
၄။ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအတွက် အရေးကြီးသကဲ့သို့ အမျိုးသား လုံခြုံရေး သည်လည်း မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၅။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ(၄)ရပ်သည် ဘာသာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးကို ရှေးရှုသော ငြိမ်းချမ်းရေးဥပဒေဖြစ်သည်။
၆။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ(၄)ရပ်သည် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုများ၊ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများကို လျော့နည်း ပပျောက်စေမည့် ဥပဒေဖြစ်သည့်အပြင် ဘာသာအားလုံးအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာစေပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုများကို ရှောင်ရှားစေနိုင်သော ဥပဒေဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့နှင့် လုံးဝမဆန့်ကျင်သော အမျိုးစောင့်ဥပဒေ အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း တိုက်တွန်းကြေညာအပ်ပါသည်။
#စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးအား #အာမခံ မပေးဘဲ ထောင်ချုပ်နှင့် #တရားရင်ဆိုင်ရန် ဖမ်းဆီး
On December 17, 2014 December 18, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးအား အာမခံ မပေးဘဲ
ထောင်ချုပ်နှင့် တရားရင်ဆိုင်ရန် ဖမ်းဆီး
ပြည်သူ့ မတ္တာတုံး ထင်လဥ တယောက် အ၀ီဇိ ငရဲမခံစားရမှီ လူပြည်ငရဲ စတင်ခံစားဘို့ လက်ထိတ်တန်းလန်း အချုပ်ခန်းခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း
သူ့နောက်မှာ အားပေးကူညီနဲ့ လိုက်ဝင်မဲ့ မွတ်ဒေါင်းပါရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်များ လည်းအသင့်ရှိသည်ဟုသိရပါကြောင်းခင်ဗျား….
ယနေ့(17-12-2014)ရက် နံနက်ပိုင်းက ချောင်းဦးမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟို) ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦးအား ပုဒ်မ ၂၉၅(က)နှင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်
ကိုထင်လင်းဦးက အာမခံလျှောက်ထားသော်လည်း တရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ပြီး အချုပ်ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်ရန် ဖမ်းဆီးလိုက်ပါသည်